Maraykanka:- Qoys 50 bilyan Oo Doollar Si lama Filaan ah ku helay | Gaaroodi News
Maraykanka:- Qoys 50 bilyan Oo Doollar Si lama Filaan ah ku helay
Qoys ku nool magaalada Louisiana ee dalka Maraykanka ayaa la kulmay arrin filan waa ah kadib markii ay ogaadeen in $50 bilyan oo doollar si lama filaan ah loogu shubay akoonkooda bangiga, sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Maraykanka.
Darren James, oo 47 sano jir ah, ayaa sheegay inuu ka yimid xaruntiisa shaqada ee Baton Rouge bishii June 12, kaddib markii ay xaaskiisa tustay lacag badan oo lagu soo shubay taleefankeeda gacanta.
“Waxaan is weydiiyay, ‘Xagay ka timid lacagtan?'” James ayaa Axaddii sidaas yiri xilli uu waraysi siinayay Telefishanka FOX. “Waxa kaliya ee aan ka fikiraynayna waxay ahayd yaa albaabkeena garaacaya … maxaa yeelay ma ogin qof leh lacagta noocaas ah.”
Ka bood Twitter boggan, 1
Qoyska ayaa isla markiiba la xiriiray bangiga Chase, sida uu sheegay aabahan oo haysta labo carruur ah.
James, oo horey uga soo shaqeeyey Waaxda Badbaadada Dadweynaha ee Louisiana, ayaa sheegay in uusan waligiis ka fikirin inuu lacagta qarsado oo uusan qofna la wadaagin.
“Waan ogayn inaysan ahayn lacagteena. Ma aanan kasban, sidaas darteed waxba kuma qaban karno,” James ayaa sidaas yiri.
Afar maalmood kadib, bangiga , ayaa ugu dambayntii saxay khaladka.
Afhayeen u hadlay shirkadda ayaa u sheegay telefishanka FOX war qoraal ah oo ay soo saartay shalay in cilad farsamo ay ku dhacday todobaad ka hor oo saamayn ku yeeshay xisaabaha bangiga. “Arrinta waa la xaliyay xisaabaadkaasna hadda waxay muujinayaan isku dheelitirnaan sax ah.”
Balse James wuxuu sheegay in bangigu uusan wali u sheegin sida khaladku uu u dhacay. Aabaha ayaa sidoo kale isweydiinaya in akoonkiisa la jabiyay iyo in kale.
“Waxaan rabaa inaan ogaado sababta ay u dhacday,” ayuu raaciyay. Taasi waxay keenaysaa inaad ka fikirto amniga koonkaaga. “
Khaladka ka dib, James, oo hadda shaqadiisii dib ugu laabtay, ayaa wuxuu sharraxay dareenkiisa ku aadan muddadii yarayd ee uu dareemay bilyaneer.
“Wuxuu ahaa dareen aad u weyn,” ayuu yiri
James wuxuu rajeynayaa in ficiladiisa ay ku dhiirrigeliyaan dadka kale inay sameeyaan waxa saxda ah.